Imingcele ephezulu nangaphansi kashukela > Ukuhlaziya
Ushukela emkhawulweni ongenhla walokho okufanele ukwenze
I-glucose ingukusebenza okunamandla okwenziwa ngamaseli womzimba womuntu. Ngenxa glucose, ukusabela eziyinkimbinkimbi biochemical kwenzeka, kukhiqizwa kilojoule ezibalulekile. Le nto itholakala ngamanani amakhulu esibindini, ngaphandle kokudla okunganele, ushukela osesimweni se-glycogen ukhishwa ungene egazini.
Ezokwelapha ezisemthethweni alikho igama elithi “ushukela wegazi”, lo mqondo usetshenziswa kakhulu ekukhulumeni kwezizwe. Kunoshukela omningi emvelweni, futhi umzimba wethu usebenzisa i-glucose kuphela.
Izinga loshukela wegazi lungahluka ngokuya ngeminyaka yomuntu, ukudla, isikhathi sosuku, izinga lokuzivocavoca umzimba nokuba khona kwezimo ezicindezelayo. Uma izinga likashukela wegazi lidlula kakhulu ibanga elijwayelekile, kuphakanyiswa isifo sikashukela.
Ukugxila kwe-glucose kulawulwa njalo, kungancipha noma kukhuphuke, lokhu kunqunywa yizidingo zomzimba. Unesibopho sohlelo oluyinkimbinkimbi yi-insulin ye-hormone, ekhiqizwa iziqhingi zeLangerhans, kanye ne-adrenaline - i-hormone yezindlala ze-adrenal.
Lapho lezi zitho zilimele, inqubo elawulayo yehluleka, ngenxa yalokho, ukukhula kwesifo kuqala, i-metabolism iyaphazamiseka.
Lapho ukuphazamiseka kuqhubeka, ama-pathologies angenakuphikiswa wezitho nezinhlelo avela.
Ushukela wegazi unqunywa kanjani?
Ukuhlolwa kwegazi kwamazinga kashukela kwenziwa kunoma yisiphi isikhungo sezokwelapha, imvamisa izindlela ezintathu zokuthola ushukela ziyenziwa:
Lezi zindlela zahlanganiswa ngonyaka wama-70s wekhulu leminyaka elidlule, zithembekile, ziyafundisa, zilula ukuzisebenzisa, ziyafinyeleleka, ngokususelwa ekuphendukeni kwamakhemikhali nge-glucose ekhona egazini.
Ngesikhathi sokufunda, kukhiqizwa uketshezi olunemibala, oluthi, kusetshenziswa ithuluzi elikhethekile, lihlolwe ubukhulu bombala, bese lidluliselwa enkombeni yokulinganisa.
Umphumela unikezwa ophikweni lwamazwe omhlaba olwamukelwe ukulinganisa izinto ezincibilikisiwe - mg nge-100 ml, mililitha ilitha legazi. Ukuguqula i-mg / ml ibe ngu-mmol / L, inombolo yokuqala kumele iphindaphindwe ngo-0,0555. Kufanele wazi ukuthi okujwayelekile koshukela kwegazi ocwaningweni ngendlela ye-ferricyanide kuhlale kuphakeme kakhulu kunezinye izindlela zokuhlaziya.
Ukuthola umphumela onembe kunayo yonke, kuzodingeka unikele ngegazi kusuka emunweni noma emvinini, lokhu kwenziwa ngesisu esingenalutho futhi kungakapheli amahora ayi-11 osuku. Ngaphambi kokuhlaziywa, isiguli akufanele sidle noma yini amahora angu-8-14, ungaphuza kuphela amanzi ngaphandle kwegesi. Ngosuku olwandulela isampula legazi, kubalulekile ukuba ungadli ngokweqile, uyeke utshwala. Ngaphandle kwalokho, kunamathuba aphezulu okuthola idatha engalungile.
Lapho sihlaziya igazi le-venous, inqubo evumelekile iyanda ngamaphesenti ayi-12, izinkomba ezijwayelekile:
igazi le-capillary - lisuka ku-4.3 liye ku-5.5 mmol / l,
i-venous - isuka ku-3.5 iye ku-6.1 mmol / l.
Kukhona futhi umehluko phakathi kwezinkomba zokusampula kwegazi lonke ngamazinga kashukela we-plasma.
I-World Health Organisation inikezela ukuxilonga isifo sikashukela ngale mingcele kashukela wegazi elandelayo: igazi eliphelele (kusuka kuthambo, umunwe) - 5.6 mmol / l, plasma - 6.1 mmol / l. Ukunquma ukuthi iyiphi inkomba kashukela ezoba yinto ejwayelekile kumuntu ngaphezulu kweminyaka engu-60, kuyadingeka ukulungisa imiphumela ngo-0.056.
Ukuhlaziywa okuzimele koshukela wegazi, umuntu onesifo sikashukela kufanele athenge idivaysi ekhethekile, i-glucometer, leyo ngemizuzwana enikeza umphumela onembile.
Amazinga kashukela wegazi anomkhawulo ophezulu futhi ophansi, angahluka ezinganeni nakubantu abadala, kepha akukho mehluko wobulili.
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-14 ubudala, okujwayelekile kusuka ku-2.8 kuye ku-5.6 mmol / l, eneminyaka eyi-14 kuye kwengama-59, le nkomba ingu-4.1-5.9 mmol / l, kumuntu oneminyaka engaphezulu kweminyaka engama-60, umkhawulo ophezulu wesimo ngu-4 , U-6, kanti phansi ngu-6.4 mmol / L.
Iminyaka yengane idlala indima:
kufika enyangeni eyi-1 evamile kuyinto 2.8-4.4 mmol / l,
kusuka enyangeni kuye eminyakeni eyi-14 - 3,3-5.6 mmol / l.
Isimo soshukela wegazi kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa singama-3.3 - 6.6 mmol / l, uma inkomba ephezulu kakhulu, sikhuluma ngohlobo lwakamuva lwesifo sikashukela. Lesi simo sinikezela ngokulandelelwa okudingakalayo kukadokotela.
Ukuqonda ikhono lomzimba lokungenisa ushukela, udinga ukwazi ukuthi inani lawo liguquka kanjani ngemuva kokudla, phakathi nosuku.
Isikhathi sosuku Izinga le-glucose ku-mmol / l
kusuka 2 kuya ku-4 ekuseni. ngaphezu kwe-3.9
ngaphambi kokudla kwasekuseni 3,9 – 5,8
ntambama ngaphambi kwasemini 3,9 – 6,1
ngaphambi kokudla kwakusihlwa 3,9 – 6,1
ihora elilodwa ngemuva kokudla ngaphansi kuka-8.9
ngemuva kwamahora ama-2 ngezansi kuka-6.7
Ngemuva kokuthola umphumela wokuhlaziywa, i-endocrinologist ilinganisa izinga kashukela wegazi njenge: evamile, ephezulu, ephansi.
Ukwanda koshukela okuyi-hyperglycemia. Lesi simo siyabonakala nazo zonke izinhlobo zokuphazamiseka kwempilo:
inqubo yokulimala okungamahlalakhona kanye nokukhulu kakhulu kumanyikwe,
Izifo zezinso ezihambisana nokuhlungwa kokulimala,
Ukwanda kwamazinga kashukela kungenzeka ezinqubweni ze-autoallergic ezihambisana nama-antibodies e-insulin ye-hormone.
Ushukela emngceleni wesimo esivamile nangaphezulu kungaba ngenxa yokuxineka, ukuzikhandla okunamandla ngokomzimba, ukucindezelwa okungokomzwelo. Izizathu kufanele futhi zifunwe ekusetshenzisweni kwenani elikhulu lama-carbohydrate, imikhuba emibi, ukuthatha ama-hormone e-steroid, ama-estrogens nezidakamizwa ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-caffeine.
Ukunciphisa ushukela wegazi noma i-hypoglycemia kungenzeka ngomdlavuza we-adrenal glands, isibindi, ukuphazamiseka kwesistimu ye-endocrine, i-pancreatic pathologies, i-cirrhosis, i-hepatitis, kunciphise ukusebenza kwe-thyroid.
Ngaphezu kwalokho, ushukela ophansi kwenzeka lapho enoshevu ngezinto ezinobuthi, i-insulin ngokweqile, i-anabolics, i-amphetamine, ama-salicylates, ukuzila isikhathi eside, ukuzikhandla ngokweqile komzimba.
Uma umama enesifo sikashukela, ingane yakhe esanda kuzalwa nayo izoba ne-glucose eyehlile.
Izindlela zokuxilonga zokuqinisekiswa kwesifo sikashukela
Kungenzeka ukuthola isifo sikashukela ngisho nangezindlela zamuva, ngokumane unikele ngegazi ushukela. Uma uqala kusuka ezinconyweni ezenziwe lula, i-prediabetes ibhekwa njengezinkomba zoshukela kuluhlu lwe-5.6-6.0 mmol / L. Ukuxilongwa kwesifo sikashukela kwenziwa uma umkhawulo ophansi usukela ku-6.1 nangaphezulu.
Ukuxilongwa okungathandabuzeki ngokuhlanganiswa kwezimpawu zalesi sifo kanye nokwanda koshukela wegazi. Kulokhu, kungakhathalekile isidlo, ushukela uhlala emazingeni ayi-11 mmol / l, futhi ekuseni - 7 mmol / l noma ngaphezulu.
Uma imiphumela yokuhlaziya ingabaza, azikho izimpawu ezisobala eziqaphelekayo, noma kunjalo, kunezici zobungozi, kuboniswa ukuhlolwa kwengcindezi. Ucwaningo olunjalo lwenziwa kusetshenziswa i-glucose, elinye igama lokuhlaziya ukuhlolwa kokubekezelela ushukela, ijika leshukela.
Le ndlela ilula impela, ayidingi izindleko zezimali, ayibangeli usizi oluningi. Okokuqala, banikela ngegazi kusuka emithanjeni esiswini esingenalutho, lokhu kuyadingeka ukuthola inani lokuqala loshukela. Ngemuva kwalokho amagremu angama-75 kashukela aqedwa engilazini yamanzi afudumele ahlanzekile futhi anikezwe isiguli ukuba siphuze (ingane ibalwa ngethamo lika-1,75 g ngekhilogremu ngayinye yesisindo). Ngemuva kwemizuzu engama-30, amahora ama-1 kanye nama-2, igazi lidonswa futhi ukuze lihlolwe.
Kubalulekile phakathi kokuhlaziywa kokuqala nokugcina:
yeka ngokuphelele ukubhema ugwayi, ukudla, amanzi,
noma yimuphi umsebenzi womzimba uvinjelwe.
Ukuqhathanisa ukuhlolwa kulula: izinkomba zeshukela kufanele zibe ezijwayelekile (noma zibe onqenqemeni lomngcele ongaphezulu) ngaphambi kokudla isiraphu. Lapho ukubekezelelwa kwe-glucose kuthambile, ukuhlaziywa kwesikhashana kuzobonisa i-10.0 egazini le-venous kanye ne-11.1 mmol / L ku-capillary. Ngemuva kwamahora we-2, okuhlushwa kuhlala kungaphansi kwemikhawulo ejwayelekile. Leli qiniso libonisa ukuthi ushukela ophuzile awugwinyi, uhlala usegazini.
Uma izinga likashukela likhuphuka, izinso ziyeka ukubhekana nalo, ushukela ungena emchameni. Lolu phawu lubizwa ngokuthi yi-glucosuria kushukela. IGlucosuria iyindlela eyengeziwe yokuthola isifo sikashukela.
Imininingwane ngamazinga kashukela egazini inikezwe kuvidiyo kule ndatshana.
Imingcele ephezulu kashukela wegazi
Iminyaka eminingi ingaphumeleli ekulweni ne-DIABETES?
Inhloko Yesikhungo: “Uyokumangaza ukuthi kulula kanjani ukwelapha isifo sikashukela ngokusithatha nsuku zonke.
Isimo se-carbohydrate metabolism sinqunywa kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene zaselebhu. Kuze kube manje, indlela enembe kakhulu futhi ebonakalayo ukunqunywa kokuqukethwe kwe-glucose esegazini. Ngokuya ngohlobo nangezinto ezibonakalayo zokuzimisela (i-serum noma i-venous igazi), okujwayelekile kungahluka ngandlela thile. Ngaphezu kwalokho, kufanele uthathe iminyaka yobudala, yokudla nemithi, ethinta iphrofayili ye-glycemic, lapho umkhawulo ophezulu kashukela wegazi ungahluka khona. Ngokuvamile, ukuhlaziya okunjalo kwenziwa ukuze kubhekwe isifo sikashukela. Lapho kunalesi sifo, kuhlolwa okwenziwa ukuqapha ukusebenza ngempumelelo kwaso. Kwesinye isikhathi ukuhlaziywa kusiza ukukhomba i-hypoglycemia noma isifo sikashukela sokukhulelwa.
Kun amayunithi amabili alinganisa ushukela we-serum: mmol / L no mg / dl. Owokuqala uvame ukusetshenziswa.
Imiphumela yokuzila, okusho ukuthi ihora lesishiyagalombili ngokushesha, akufanele idlule umkhawulo ka-5.5 mmol / L. Ngemuva kwamahora amabili kulayishwe ama-carbohydrate, umkhawulo ophezulu ngu-8.1 mmol / L. Uma isikhathi esiningi sesidlulile, khona-ke isilinganiso esiphezulu ngu-6.9 mmol / L.
Uma usola isifo sikashukela, kufanele unqume izinkomba ze-glycemia ngokushesha. Ukuhlaziywa kufanele kuthathwe ngezikhathi ezihlukile ukuze kutholakale umphumela wokuphila kwephrofayili ye-glycemic.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, i-glycemia iyanda ngemuva kokudla, ngaphezu kwakho konke kukhuliswa ngokudla okune-carbohydrate okusheshayo noma elula. Ngokuya ngesikhathi sosuku nokudla, izinga lingashiyana.
Izibalo zokuzila zibonisa i-glycemia ngemuva kwamahora ayisishiyagalombili wokuzila ukudla. Lolu uvivinyo lokuqala olunconyelwayo uma usola isifo sikashukela noma i-prediabetes (ukubekezelelwa kwe-carbohydrate). Isifo sikashukela kufanele sihlolwe esiswini esingenalutho ngaphambi kokuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Kwesinye isikhathi ukuhlaziywa kuchazwa kaningana ngosuku, kanti umuntu ophilile ngeke abe nokuguquguquka okukhulu ku-glycemia. Kepha uma iphrofayili ye-glycemic inezikhala ezinkulu, khona-ke, kungenzeka kube nezinkinga ngokusebenza kwamaseli yi-islet yeLangerhans.
Izinkomba ezidlula ebangeni elijwayelekile zingakhombisa isifo sikashukela, kepha amanye ama-pathologies nawo angafihlwa ngaphansi komaskandi wawo. Isifo sikashukela sisungulwa ngesisekelo sokudlula kwemikhawulo ephezulu ye-glycemia nge:
isifundo esisheshayo kashukela ongu-7.0 mmol / l okungenani kabili,
ngemuva kokudla, umthwalo we-carbohydrate noma ngomphumela wokungahleliwe wokuhlaziywa phakathi nosuku (kusuka ku-11.1 mmol / l).
Ukuze ungavusi ukukhuphuka ngokweqile kwe-glycemia, kufanele udle ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi namaprotheni esikhathi sasekuseni. Imikhiqizo emihle yalokhu amaqanda, imifino, inhlanzi nenyama ebunjiwe.
Ukubonakaliswa okuvame kakhulu kwesifo sikashukela ukoma nokuchama ngokushesha, kanye nesifiso sokudla, umbono ongahambisani kahle nomuzwa wokukhathazeka ezingalweni nasemilenzeni.
Uma umkhawulo ophezulu wesimo ushukela udlulwa kancane (kufinyelela ku-6.9 mmol / l), khona-ke lokhu prediabetes.
Ukubala kwegazi kwe-Glycemic ngenhla okujwayelekile kungenzeka ngenxa yezinqubo ezinjalo:
Isifo sikaCushing noma isifo,
ukuthatha imishanguzo (corticosteroids).
Mhlawumbe isimo esinjalo kulapho izinga likashukela wegazi lehla khona ngaphansi komkhawulo walo ophansi ojwayelekile. Lesi simo senzeka kaningi ngama-insulinomas - izimila ezikhiqiza inani le-insulin ngokweqile.
Kaningi kwezokwelapha, kusetshenziswa izindlela ezilandelayo:
kuyiqiniso - i-oxidant yeshukela, okujwayelekile ngu-3.3-5.5 mmol / l,
ngezinto zokunciphisa, okujwayelekile ngu-4.4-6.5 mmol / L.
Lokhu kokugcina akunconywa kwiziguli ezine-renal pathology, ngoba izinkomba zinganda kakhulu.
Abantu abahlukahlukene banezinkomba zephrofayili ye-glycemic ehlukile, ngokuya ngokudla kwabo nendlela yabo yokuphila. Kungakhathalekile ukuthi iyiphi indlela yokunquma i-glycemia, egazini le-capillary, izinkomba ziphakeme kancane.
Inkomba ebaluleke kakhulu yokuxilonga isisu esingenalutho. Kodwa-ke, izivivinyo ezinomthwalo we-carbohydrate zisetshenziswa kabanzi. Ukubekezelelwa kwe-glucose kunqunywa. Okujwayelekile ukusebenzisa amagremu ayishukela angama-75, kulandele izivivinyo njalo ngehora amahora amabili. Kwezinye izimo, kusetshenziswa uhlobo olufushanisiwe lovivinyo, oluhlanganisa ukuzila ukudla kwe-glycemia kanye nokuhlolwa okwalandela kwesikhathi esisodwa ngemuva kwemizuzu engu-120.
Ezimweni ezicindezelayo, noma kungaba nokudla okufanele, umkhawulo ophezulu wojwayelekile uzodlulwa. Ngaphezu kwalokho, ukucindezela kuholela ekubukekeni kwesisindo ngokweqile. Lezi zinqubo zenzeka ngenxa yokwanda ukukhiqizwa kwe-cortisol.
Uma kungekho ukwephulwa ku-carbohydrate metabolism, khona-ke ukujwayelekile ngeke kudlule. Kepha nge-latent yesifo sikashukela se-latent, imiphumela yokuhlolwa kwengcindezi izothusa (ngaphezulu kwe-11 mmol / l). Lokhu kuhlolwa kukhombisa ukuthi kunesifo sikashukela. Ukuhlolwa kwenziwa ngokuzilungiselela - kunconyelwa ukudla okunama-hypocarbohydrate ezinsukwini ezi-3 ngaphambi kocwaningo.
Izizathu zokwehlisa ushukela wegazi
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ushukela wegazi ungawa ngaphansi kwebanga elijwayelekile. Phakathi kwazo, okuvame ukwahlukaniswa:
isifo sokuqina kwesibindi noma i-hepatitis,
isidakamizwa esisetshenziselwa ukwehlisa ushukela,
Phakathi kwemithi ethinta iphrofayili ye-glycemic, kufanele kuphawulwe:
Abantu abanesifo sikashukela kudingeka bazi ushukela wegazi labo. Ukuze ungadluleli ngalezi zinkomba, kufanele uhlele indlela yakho yokuphila, uthathe izidakamizwa nokunciphisa ushukela ngasikhathi sinye.
Ngaso leso sikhathi, ukuyeka zonke izinhlobo zemikhuba emibi kuzosiza ukuthi ungacabangi ngamanani kashukela wegazi isikhathi eside ngangokunokwenzeka, ngoba izincomo ezinjalo zizosiza ukunciphisa amathuba okuxilongwa kwesifo sikashukela.
Yini okufanele ibe amazinga ajwayelekile e-cholesterol egazini?
I-cholesterol yinto efana namafutha lapho i-cholesterol plaque yakheka khona ngaphakathi kwensimbi yegazi. Amathafa ayimbangela eyinhloko yezinguquko ze-atherosclerotic emzimbeni womuntu. Ukuba khona kwabo kukhulisa ubungozi bokufa kusuka ku-myocardial infarction kanye ne-hemorrhagic stroke izikhathi eziningana.
I-cholesterol ingeyesigaba samafutha. Cishe i-20-25% yale nto ingena emzimbeni womuntu kanye nokudla. Lawa ngamafutha emvelaphi yesilwane, ezinye izinhlobo zezinto ezinamaprotheni, njll. Amanye ama-75-80% asele akhiqizwa esibindini.
Into efana namafutha ibonakala njengendawo ebaluleke kakhulu yokwakha amaseli womzimba womuntu. Iba yingxenye yezinqubo ze-metabolic ezingeni lamaselula, iyingxenye yolwelwesi lweseli. Ikhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone ocansi abesilisa nabesifazane - i-cortisol, i-testosterone, i-estrogen, iprogesterone.
Ngokwesimo sayo esimsulwa, kune-cholesterol encane emzimbeni womuntu, ebonwa ikakhulu ekwakhiweni kwezakhi ezikhethekile - i-lipoproteins.Beza nge-density low (i-cholesterol embi noma i-LDL) nobuningi obuphakeme (HDL noma ingxenye enhle). Ake sibheke ukuthi yiziphi izindinganiso ze-cholesterol yegazi eziqondiswa ngomuthi, futhi izinkomba zincike kuphi?
Izinga cholesterol embi
Imithombo eminingi yolwazi - amapulatifomu atholakalayo ku-Inthanethi, izinhlelo zethelevishini, amaphephandaba, njll., Zikhuluma ngobungozi be-cholesterol emzimbeni womuntu, ngenxa yalokho kubukeka sengathi kuncane, kungcono empilweni nasenhlalakahleni. Kepha lokhu akunjalo. Njengombana into le “ayilimazi” kwaphela, ukufakwa emithanjeni yegazi, kodwa futhi iletha izinzuzo ezibonakalayo.
Futhi konke kuncike ekugxilweni kwengxenye ebalulekile. Njengoba sekuphawuliwe, i-cholesterol eyingozi futhi inenzuzo iyagcinwa. Ingxenye "enamathela" ezindongeni zemithambo yegazi yinto engalungile, ngoba yakha izingqimba ze-atherosulinotic.
Ukuhlolwa kwesisu esingenalutho kwenziwa ukuthola izinkambiso ze-cholesterol. Izinkomba zikalwa ngama-moles ngelitha noma mg / dl. Ungathola futhi inani elijwayelekile ekhaya - ngoba, kusetshenziswa abahlaziyi abakhethekile. Abantu abanesifo sikashukela kumele bathole ithuluzi elilinganisa kanyekanye i-cholesterol noshukela wegazi. Kunamadivayisi asebenzayo futhi akhombisa okuqukethwe yi-hemoglobin, i-uric acid.
Imvelo ye-cholesterol (LDL):
Uma umuntu ophilile enenkomba yamayunithi angaphansi kwe-4 - lokhu kujwayelekile. Lapho kutholwa ukwanda kwaleli nani, bese bekhuluma ngesimo se-pathological. Isiguli sinconywa ukuba siphinde sihlolisise lokho. Uma kuba nomphumela ofanayo, ukudla noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuyadingeka. Ukuthi uphuza amaphilisi noma cha, kunqunywa ngawodwana. Izimo - izidakamizwa ze-cholesterol, aziqedi imbangela yokwanda kwe-LDL (isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile, ukuntuleka kokuzivocavoca), kodwa vele ungakuvumeli ukukhiqizwa emzimbeni, ngenkathi kuholela emiphumeleni emibi ehlukahlukene,
Lapho umlando wesifo senhliziyo noma we-myocardial infarction, isifo sohlangothi se-hemorrhagic esikhathini esedlule esedlule, i-angina pectoris, lapho-ke ukuhlolwa kwegazi kwelebhu kuyinto evamile kufinyelela kumayunithi ayi-2,5. Uma ephakeme - ukulungiswa kuyadingeka ngosizo lokudla okunempilo, okungenzeka ngemithi,
Iziguli ezingenawo umlando we-pathologies yenhliziyo nemithambo yegazi, lapho kunezici ezimbili noma ngaphezulu ezicasulayo, kufanele zigcine umugqa ophansi wamayunithi angama-3.3. Leli yileveli okugxilwe kuyo kwabanesifo sikashukela, ngoba isifo sikashukela singathinta kabi isimo semithambo yegazi kanye nenqubo yezinqubo ze-metabolic emzimbeni.
Imvelo ye-cholesterol (isiyonke) ifinyelela ku-5.2 mmol / l - leli inani elifanele. Uma ukuhlaziya kukhonjiswe kusuka kumayunithi angama-5.2 kuya kwayi-6.2 - uhlobo oluphezulu oluvumelekile lwenkambiso, futhi amayunithi angaphezu kuka-6.2 - isibalo esiphakeme.
Amanani Ajwayelekile E-Cholesterol Efanele
Umphikisi wento emibi i-cholesterol enhle. Ibizwa ngokuthi i-high density lipoprotein. Ngokungafani nengxenye efaka ekubekelweni kwamathafa e-atherosulinotic, i-HDL ibonakala ngokusebenza okubalulekile. Uqoqa i-cholesterol embi emikhunjini ayithumele esibindini, lapho ibhujiswa khona.
Izinguquko ze-atherossteotic emithanjeni yegazi zingenzeka hhayi ngezinga eliphakeme le-LDL, kodwa futhi nokwehla kwe-HDL.
Inketho embi kakhulu yokuhlolwa kokuhlolwa kwe-cholesterol ukwanda kwe-LDL kanye nokwehla kwe-HDL. Yile nhlanganisela etholwa kuma-60% abantu abanesifo sikashukela, abadala kakhulu kuneminyaka engama-50 ubudala.
I-cholesterol enhle ayikwazi ukwenziwa kabusha ngokudla kahle. Umuthi ukhiqizwa kuphela ngumzimba uqobo, awungeni ngaphandle. Izinga le-cholesterol (ezuzisayo) lihambisana nobudala bomuntu nobulili. Kwabesifazane, okujwayelekile kwengxenye ewusizo kukhuphuke kancane kunokobucansi obunamandla.
Ungangeza ukwakheka kwengxenye ewusizo ngokusebenza kahle komzimba. Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo zenza omunye umsebenzi - ngasikhathi sinye, i-HDL iqala ukwanda ngokumelene nesizinda sokushiswa kweLDL. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela bayalulekwa ukuba bahambe ngaphezulu, zivivinya umzimba uma kungekho okubhekisana nakho kwezokwelashwa.
Kukhona enye indlela yokwandisa i-HDL - lokhu ukusetshenziswa kwemikhiqizo eqinile yotshwala, ngokwesibonelo, i-50 g ye-cognac. Kepha inketho enjalo yesifo sikashukela inqatshelwe ngokuphelele, abanesifo sikashukela abakwazi ukuphuza utshwala. Ukuphakamisa i-cholesterol, kunconywa ezemidlalo, umsoco ofanele. Amaphilisi avame ukubekelwa ukusiza ukwehlisa i-cholesterol ye-LDL.
Isimo se-HDL egazini:
Ngokusebenza okujwayelekile kwenhliziyo nemithambo yegazi, i-HDL emadodeni / abesifazane ayiyona into engaphezu kweyodwa.
Uma isiguli sinomlando wesifo senhliziyo, isifo senhliziyo, isifo sohudo, isifo sikashukela, khona-ke inkomba isukela kumayunithi ayi-1 kuye kwayi-1.5.
Ekuhlolweni kwegazi, i-cholesterol ephelele nayo iyabhekwa - lesi yisamba se-HDL ne-LDL. Okujwayelekile kubantu abasha kuya kumayunithi angama-5.2. Uma intombazane inokweqiwa okuncane kwemingcele ejwayelekile, khona-ke lokhu kubhekwa njengokuphambukayo kokujwayelekile. Ngisho nokugcwala ngokweqile kwe-cholesterol akuboniswa ngezibonakaliso zezimpawu kanye nezimpawu.
Imvamisa, isiguli asiboni ukuthi ama-atherosulinotic plaque asakhe ngaphakathi kwemikhumbi yakhe.
Ngakho-ke, kungakanani okujwayelekile kwe-LDL ne-HDL okutholakele. Kwezokwelapha, baqondiswa amatafula wemigomo, ahlukaniswe ngokuya ngobulili nobudala bomuntu. Iminyaka eminingi yesifo sikashukela, ephakeme izoba yiso esijwayelekile. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi isifo sikashukela siyinto eyingozi, ngakho-ke, ngokumelene nesizinda saso, izinga lokuhlaselwa kwabanesifo sikashukela lihlala liphansi kakhulu kuneziguli ngaphandle kwalesi sifo.
Uma ngokweqiniso, umuntu ongakhathazeki ngokuwohloka kwenhlalakahle kanye nanoma yiziphi izimpawu eziphazamisayo kungenzeka angabaze ngesimo semithambo yegazi lakhe. Kepha ngeze. Ukuzilolonga kukhombisa ukuthi bonke abantu badinga ukwenza ukucubungula okungenani kanye ngeminyaka emihlanu.
Ama-diabetesics ayelulekwa hhayi kuphela ukulawula i-glucose yegazi, kodwa futhi ngezikhathi ezithile alinganise okuqukethwe kwe-cholesterol embi. Ukuhlanganiswa kwama-pathologies amabili kusongela ngezinkinga ezinkulu.
Iqembu lengcuphe lifaka:
Iziguli ezikhuluphele noma ezikhuluphele kakhulu kunoma yisiphi isigaba,
Uma umlando wokuhluleka kwenhliziyo, i-pathology yenhliziyo nemithambo yegazi,
Abantu abahamba kancane
Ucansi olunamandla ngaphezu kweminyaka engama-40 ubudala,
Iziguli zeqembu labantu asebekhulile.
"Ukuhlolwa" kwe-cholesterol kungenziwa kunoma yisiphi isikhungo sezokwelapha. Ocwaningweni, udinga u-5 ml we-biological fluid, othathwe kumthambo.
Amahora ayi-12 ngaphambi kokuba isampula legazi lingadliwa, ukukhawulelwa kokusebenza komzimba kuyadingeka.
Ukweqa isifundo se-cholesterol
Abanesifo sikashukela bayelulekwa ukuthi bathenge insiza ekhethekile ephathekayo ebizwa ngokuthi yi-electrochemical glucometer. Idivayisi ilinganisa i-cholesterol ekhaya. I-algorithm yocwaningo ekhaya ilula, hhayi nzima, kepha ungahlala ulawula inkomba ebalulekile.
Ukuhlolwa kwegazi elabhorethri kwamakhemikhali kukhombisa amanani amathathu - inani eliphelele lezinto, i-LDL ne-HDL. Imikhombandlela yenkomba ngayinye yehlukile, ngaphezu kwalokho, ziyehluka ngokuya ngeqembu lomuntu lomuntu, ubulili.
Qaphela ukuthi asikho isibalo esiqondile esinquma inani le-cholesterol. Odokotela basebenzisa amatafula ajwayelekile akhombisa uhla lwamanani wamadoda nabobulili obuhle. Ngakho-ke, ukwanda noma ukwehla kwe-cholesterol kukhombisa ukukhula kwesifo.
Kumuntu onesifo sikashukela, isilinganiso kufanele sibalwe uchwepheshe wezokwelapha. Ukuzilolonga kukhombisa ukuthi ezigulini ezinjalo, izinga lokuqondisa lisondela emkhawulweni ophansi wesimo, esiza ekugwemeni izinkinga ezahlukahlukene.
I-OH ijwayelekile ukusuka kumayunithi angama-3.6 kuya kwangama-5.2. Bakhuluma ngenani elikhuliswe ngokulingana uma umphumela uhluka kusuka kumayunithi angama-5.2 kuya kwangama-6.19. Ukwanda okuphambili kuqoshwa lapho i-cholesterol isuka kumayunithi ayi-6.2.
I-LDL ijwayelekile kufika kumayunithi angama-3.5. Uma ukuhlolwa kwegazi kukhombisa ngaphezu kwe-4.0 mmol / L, khona-ke lesi yisibalo esiphakeme kakhulu.
I-HDL ijwayelekile kufika kumayunithi angama-1.9. Uma inani lingaphansi kuka-0,7 mmol / l, khona-ke kwisifo sikashukela, amathuba we-atherossteosis akhuphuka kathathu.
OH ocansini olunamandla, njengakwabesifazane. Kodwa-ke, i-cholesterol ye-LDL ihlukile - imikhawulo evumelekile ingu-2.25-4.82 mmol, kanti i-HDL iphakathi kwamayunithi angama-0.7 no-1.7.
I-Triglycerides kanye ne-Atherogenicity Ratio
Lapho kukhona i-cholesterol ephezulu emzimbeni wesifo sikashukela, kuyadingeka ukuhlanza imithambo yegazi - ukudla, ezemidlalo. Odokotela bavame ukunquma ama-statins noma i-fibrate - imishanguzo, ayinqatshelwe ukusebenzisa amakhambi abantu - imikhiqizo yezinyosi, i-chicory, i-tincture ye-hawthorn, i-Leuzea dioecious, njll. Izitshalo eziphilisayo.
Ukuhlolwa okuphelele kwesimo se-fat metabolism, amanani we-triglycerides ayathathwa. Kwabesilisa nabesifazane, amanani ajwayelekile awafani. Imvamisa, kuze kufinyelele kumayunithi ama-2 ahlanganisiwe, alingana no-200 mg / dl.
Umkhawulo, kepha okujwayelekile kufinyelela kumayunithi angama-2.2. Basho izinga eliphakeme uma izivivinyo zikhombisa imiphumela engu-2.3 kuye ku-5.6 mmol ilitha ngalinye. Isibalo esiphezulu kakhulu ngaphezulu kwamayunithi angama-5.7. Lapho uthola imiphumela, kufanele kukhunjulwe ukuthi amanani wokusebenza wezibalo ezihlukile angahlukahluka, ngakho-ke, imininingwane elandelayo ithathwa njengesisekelo:
I-OH yabamele bobabili ubulili isukela kumayunithi amathathu kuya kwayisithupha,
I-HDL emadodeni - amayunithi angu-0.7-1.73, abesifazane - ukusuka ema-0.8 kuya kuma-2.28 amayunithi,
I-LDL emadodeni kusuka ku-2.25 kuya ku-4.82, abesifazane - 1.92-4.51 mmol / l.
Njengomthetho, izinkomba zesethenjwa zihlala zikhonjiswa kwifomu lemiphumela evela elabhorethri, ngokulandelana, futhi udinga ukugxila kuyo. Uma uqhathanisa amanani akho nezindinganiso ezethulwe kwi-Intanethi, ungafinyelela esiphethweni esingalungile.
Ungalawula okuqukethwe kwe-cholesterol ngokungeza imikhiqizo ethile kumenyu, ukhuphula noma wehlise inani lenyama, amafutha wezilwane, njll. Zonke izinguquko ekudleni kwabanesifo sikashukela kufanele zihambisane nodokotela wakho.
Isilinganiso sezinto ezilusizo neziyingozi egazini lalabo abanesifo sikashukela kuthiwa yi-coheroffi ye-atherogenic. Ifomula yayo yi-OH minus high density lipoproteins, khona-ke inani eliphumelelayo lihlukaniswe ngamazinga aphezulu we-lipoprotein. Inani lama 2 kuya ku-2.8 amayunithi kubantu abaneminyaka engama-20 kuye kwengama-30 yinto ejwayelekile. Uma ukuhlukahluka kusuka kumayunithi amathathu kuya kwayi-3,5 - khona-ke lokhu kuyinto evamile ezigulini ezineminyaka engaphezu kwengama-30, uma umuntu emncane - kunobungozi bokukhula kwe-atherosclerosis. Lapho isilinganiso singaphansi kokujwayelekile - lokhu akuyona imbangela yokukhathazeka, umphumela onjalo awunanzuzo yomtholampilo.
Ekuphetheni: cholesterol is low and high kwabantu, into embi futhi enhle, ngokulandelana. Abantu abangenawo umlando we-CVD bayalwa ukuthi bavivinye njalo eminyakeni emi-4-5, abanesifo sikashukela badinga ukukala kaningana ngonyaka. Uma unezinketho eziphezulu ze-LDL, kuzodingeka ukuthi ushintshe imenyu yakho bese uhambisa okuningi.
Mayelana nokujwayelekile kwe-cholesterol kuchazwe kuvidiyo kule ndatshana.
I-Hypoglycemia - isibopho esiphansi
Manje ake ngemininingwane eminingi. Njengoba wazi, uma umuntu engadli futhi ezibandakanya nokuzikhandla okukhulu ngokomzimba, khona-ke ushukela emzimbeni uqala ukushisa njenge-brawwood emlilweni, futhi namazinga kashukela ehla kakhulu.
Lapho ushukela wehla ufinyelela ezingeni le-3.5 mmol / l, ukukhanya okubomvu kuvuleka futhi umzimba wethu usebenze ukunikezwa kwama-carbohydrate asheshayo, ama-carbohydrate abizwa ngokuthi yi-glycogen, awakhiphe kusuka esibindini aya emisipha.
Ukulondolozwa kweGlycogen kwanele imizuzu eyi-15 bese kuthi, uma singayeki noma sidle okuthile okumnandi, ukufa kwenzeka.
Ngakho-ke, umkhawulo ophansi, okungcono ukungaweli, ngu-3.5 mmol / ilitha
Yiziphi izinkomba umzimba ezinikezayo uma kwehla ushukela wegazi?
Ukukhathazeka kwangaphakathi, ukwethuka kuyanda, kuvela ijezi futhi umuntu akaqondi ukuthi uvelaphi. Kubukeka sengathi yonke into isezolile futhi bebengekho ama-harbinger
Ubuthaka obukhulayo bubonakala emisipha. Inkulumo ethi "imilenze ecwengekileyo" ivele ngokuqondile lapha.
Kuvele umjuluko omatasa kakhulu egagasi, umnyama emehlweni, ingcindezi ihle kakhulu, i-pallor, i-arrhasmia ivele.
Futhi ekugcineni, emizuzwini eyi-15 nje, ukulahleka kwengqondo nokufa.
I-Hyperglycemia - umkhawulo ophezulu
I-Hyperglycemia nayo iyingozi. Eminyakeni yokuqala yama-70s, izinga eliphezulu lalingu-5.5 mmol / litre. Kungani 5.
5? Ngoba yileli zinga elikhuphuka ushukela wegazi lapho lichithwa.
Ngokuthuthuka kokudla okusheshayo, ukubonakala kwezinkampani zonke kukhiqiza ama-hamburger, izinja ezishisayo, amaswidi, ama-muffin ahlukahlukene namaswidi, abantu baqala ukuhlala ezitolo ezisheshayo ezinamakhowe futhi kuma-80s esinye isibalo samukelwa ngokusemthethweni - i-5.8 mmol / lit.
Kepha kuma-90s, iningi labantu laqala ukubeka amanani ngenhla kuka-5.8 futhi, ukuze wonke umuntu angakwazi ukuthola isifo sikashukela, ibha yanyuselwa ku-6 mmol / ilitha. Lokhu kwahlala kuze kube ngu-2002, lapho i-Europe yonke iguqukela ku-6.2, kwathi ngonyaka we-2010 yaya ku-6.5 mmol / litre.
Kuyini lokhu okukhulunywa ngakho? mayelana noshintsho kwezondlamzimba luqonde eqenjini elisheshayo lama-carbohydrate. Futhi njengoba abantu bengasanyakazi, kepha, kunalokho, baphenduka umuntu onengqondo baya kumuntu ohlala phansi, abadli ama-carbohydrate.
Ngakho-ke, amazinga kashukela akhuphuki kokukodwa, okubili, kokuthathu, kepha ngesilinganiso esikhulu. Futhi ukuze bangafaki ushukela kuwo wonke umuntu, baphakamisa okujwayelekile,
okukhombisa isithombe esisongelayo sezinqubo ezenzeka emzimbeni. Uma kuqhubeka kanjalo. ke ngonyaka ka-20 kuzoba ngu-6.8 ...
Isifo sikashukela siphakathi kwamanani amakhulu okukhubazeka nokufa kwabantu emhlabeni jikelele. Futhi ukuze unganikeli wonke umuntu amalungelo e-federal, kulula ukuthi umbuso ubuyekeze izinkambiso, okwenzeka kuwo wonke amazwe.
Futhi nokho, umngcele ngu-5.8 mmol / L, ngaphezu kwalapho i-latent, i-mentitus yesifo sikashukela se-latent iqala futhi akukho okunye
Kwakukholelwa ukuthi isifo sikashukela sithinta labo abanamazinga kashukela egazi aphakeme kakhulu kunokujwayelekile. Kepha empeleni, okungu-5.8 mmol / l njalo, lo mngcele ongabonakali
Isifo sikashukela esijikelezayo siyingozi kakhulu emithanjeni yegazi. Ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma unhlangothi, ukwehluleka kwenhliziyo kuyanda. Umbono nohlelo lwezinzwa kuyahlupheka. Umuntu akazizwa ekubonakalisweni kwalesi sifo.
Ukuze uthole isithombe seqiniso, qiniseka ukuthi ufunda ukuthi ungaziphumelela kanjani izivivinyo
Umuntu angasola uhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela kumuntu lapho umzimba unikeza lezi zimpawu ezilandelayo:
Ukomela okukhulu. Umuntu uphuza aze afike kumalitha ayi-5 ngosuku.
Amanxeba nezinye izilonda zesikhumba zipholisa kahle futhi kancane.
Izinkinga zesikhumba: ukumiswa, ukukhonkotha, isikhunta.
I-Polyuria, ukuchama kaningi, ikakhulukazi ebusuku.
Indlala engapheli kanye nokunciphisa umzimba ngokweqile.
Umoya omubi, okhumbuza i-acetone.
Imvamisa, thayipha isifo sikashukela esi-1 ingavela emavikini ama-2 noma enyangeni ngemuva kwezifo ezibalulekile zegciwane noma ukushaqeka okukhulu
Izimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2
Isifo sikashukela sohlobo 2 sikhula kancane kancane eminyakeni eminingi. Imvamisa lesi sifo sithinta abantu asebekhulile. Ngakho-ke, izinkomba zesifo sikashukela sohlobo 2 zifana nesifo sikashukela sohlobo 1, noma kunjalo, kunezimpawu ezilandelayo:
Izifo zabesifazane, ngokwesibonelo, i-thrush.
Ukonakala okungazelelwe noma ukushintshashintsha okungapheli kombono
Kuyini ingozi kashukela wegazi engxenyeni ephezulu yokujwayelekile
Ushukela ophezulu wegazi udala umonakalo omkhulu ebuchosheni. Ngisho nezinga emkhawulweni ophezulu wobubanzi obujwayelekile busengozini.
Kuze kube muva nje, bekucatshangwa ukuthi abantu abanoshukela wegazi bahlala emkhawulweni ophezulu webanga elijwayelekile bangabhekwa njengabaphilile. Isimo esinjalo besingekho esimweni esisheshayo sokuxilonga, njenge-prediabetes noma isifo sikashukela.
Akugcinanga lapho, uchungechunge lwezifundo kule ndawo lwenziwa ngochwepheshe e-Australia National University eCanberra. Ososayensi bafakazele ukuthi ngokushesha ngokwanele lezi ziguli zingena esigabeni seziguli ezinesifo sikashukela.
Ochwepheshe baphinde baveza ukuthambekela kokwehla kwenani lobuchopho, uma kuqhathaniswa nabantu abanoshukela omncane wegazi.
Ekutadisheni okuningi, ukuxhumana kukhonjisiwe phakathi kokuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nokuthi umthamo wobuchopho uyancishiswa futhi kwakhiwa ukuwohloka komqondo. Iqiniso lokuthi abantu abanamazinga kashukela egazini emngceleni omuhle kakhulu uvame ukuba nomphumela ofanayo sekuyinto entsha ngokuphelele kochwepheshe.
Ungasabela kanjani kukho
Iziguli ezinamazinga kashukela egazini asemkhawulweni ophakeme wesimo esijwayelekile kufanele siguqukele endleleni yokuphila ejwayelekile kubantu abane-prediabetes bese sithatha ukuvimbela isifo sikashukela okujwayelekile. Lokhu kusho ukuthi kufanele:
thatha isinkwa esanele no okusanhlamvu,
kunokudla okuningi okuhlukile nge-fiber eyandayo,
kufanelekile ukungeza amabele ezinhlolweni nakusobho ngesikhathi sokupheka,
yidla imifino nezithelo nsuku zonke,
ungakhohlwa ngemikhiqizo yobisi enokuqukethwe kwamafutha okuncishisiwe,
udinga ukudla okuningi okubilisiwe,
ikhombisa izitsha eziphekwe kuhhavini,
Gwema ukudla okuphezulu notshwala, amafutha, ushukela.
Yiliphi izinga leshukela elivumelekile egazini lomuntu?
I-glucose iyithuluzi lamandla eliyinhloko lokondla amaseli womzimba. Kuyo, ngokuphendula okuyinkimbinkimbi kokuhlukahluka kwamakhemikhali, amakhalori adingekayo kakhulu empilweni ayatholakala. IGlucose iyatholakala ngesimo se-glycogen esibindini, iyakhishwa lapho kutholakala ukunganele kwe-carbohydrate kusuka ekudleni.
Igama elithi "ushukela wegazi" alilona elezokwelapha, kunalokho lisetshenziswe ekukhulumeni kwenhliziyo, njengomqondo ophelelwe yisikhathi. Ngemuva kwakho konke, kunoshukela omningi emvelweni (ngokwesibonelo, i-fructose, i-sucrose, i-maltose), futhi umzimba usebenzisa kuphela ushukela.
Isimo somzimba sikashukela wegazi siyahlukahluka kuye ngesikhathi sosuku, ubudala, ukudla, ukusebenza komzimba nokucindezela.
Amazinga kashukela wegazi alawulwa ngokuzenzakalelayo ngokuzenzakalela: ayanda noma anciphise kuye ngezidingo. "Lawula" lolu hlelo oluyinkimbinkimbi lwe-pancreatic insulin, ngokwezinga elincane, i-adrenaline i-adrenaline.
Izifo zalezi zitho ziholela ekwehlulekeni kwendlela elawulayo. Kamuva, kuqubuka izifo ezahlukahlukene, okuthi ekuqaleni zibangelwe yiqembu lokuphazamiseka kwe-metabolic, kepha ngokuhamba kwesikhathi ziholela kwi-pathology engaphenduki yezitho nezinhlelo zomzimba.
Ukutadisha kwe-glucose egazini lomuntu kuyadingeka ukuhlola impilo, nokuphendula okuguqukayo.
Ushukela wegazi unqunywa kanjani elabhorethri
Ukuhlolwa kwegazi likashukela kwenziwa kunoma yisiphi isikhungo sezokwelapha. Izindlela ezintathu zokunquma ushukela asetshenziswa:
Zonke izindlela zihlanganisiwe kuma-70s wekhulu leminyaka elidlule. Bahlolwa ngokwanele ukuze bathembeke, bafundise, kulula ukukusebenzisa. Kususelwa ekuphendukeni kwamakhemikhali nge-glucose yegazi. Ngenxa yalokhu, kwakhiwa isixazululo sombala, okuthi kudivayisi ekhethekile ye-photoelectrocalorimeter ihlole ubukhulu bemibala bese uyihumusha ibe yinkomba yokulinganisa.
Imiphumela inikezwa emayunithi aphesheya kwezwe okulinganisa izinto ezincibilikisiwe - mmoles ngelitha legazi noma ku-mg nge-100 ml. Ukuguqula i-mg / L ibe ngu-mmol / L, isibalo sidinga ukwandiswa ngu-0,0555. Isimo soshukela wegazi ocwaningweni lwendlela yeHagedorn-Jensen siphezulu kakhulu kunakwabanye.
Imithetho yokuhlolwa kweglucose: igazi lithathwa emunweni (capillary) noma emthanjeni ekuseni kuze kube ngu-11:00 esiswini esingenalutho. Isiguli sixwayiswa kusengaphambili ukuthi akufanele sidle amahora ayisishiyagalombili nane nane ngaphambi kokuthatha igazi. Ungaphuza amanzi. Usuku olwandulela lolu hlaziyo, awukwazi ukudla ngokweqile, uphuze utshwala. Ukwephulwa kwale mibandela kuthinta ukusebenza kohlaziyo futhi kungaholela eziphethweni ezingalungile.
Uma ukuhlaziywa kwenziwa ngegazi le-venous, khona-ke izinkambiso ezivumayo zenyuka ngo-12%. Izinhlobo zikashukela kuma-capillaries zisuka ku-3.3 ziye ku-5.5 mmol / l, naseVienna zisuka ku-3.5 ziye ku-6.1.
Ngaphezu kwalokho, kunomehluko ekusebenzeni lapho uthatha lonke igazi eliphuma emunweni kanye nethambo elinamazinga kashukela we-plasma.
Igazi le-capillary ushukela
Lapho yenza izifundo zokuvimbela abantu abadala ukutholwa kwesifo sikashukela, i-World Health Organisation iphakamise ukuthi kubhekwe imikhawulo ephezulu yale nto evamile:
kusuka emunweni nasemthanjeni - 5.6 mmol / l,
ku-plasma - 6.1 mmol / L.
Ukuthola ukuthi yisiphi isilinganiselo se-glucose esifanelana nesiguli esikhulile ngaphezulu kweminyaka yobudala engama-60, kunconywa ukuthi kwenziwe ukulungisa inkomba minyaka yonke ku-0,056.
Iziguli ezinesifo sikashukela zinconywa ukusebenzisa i-glucometer ephathekayo ukuzenzela ushukela wegazi.
Isimo soshukela wegazi osheshayo sinomngcele ophansi nangaphezulu, siyahluka ezinganeni nakubantu abadala, akukho mehluko ebulilini. Ithebula libonisa amazinga ngokuya ngeminyaka.
Iminyaka (iminyaka) Amanani we-glucose ku-mmol / L
ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-14 2,8 – 5,6
kwabesifazane nakwabesilisa 14 - 59 4,1 – 5,9
ebudaleni obungaphezu kweminyaka engama-60 4,6 – 6,4
Iminyaka yobudala yengane ibalulekile: ezinganeni kuze kube yinyanga, u-2.8 - 4.4 mmol / l uthathwa njengejwayelekile, kusukela enyangeni kuya eminyakeni eyi-14 - kusuka ku-3.3 kuya ku-5.6.
Kwabesifazane abakhulelwe, i-3.3 kuye ku-6.6 mmol / L ibhekwa njengejwayelekile. Ukwanda kokuhlungwa kwe-glucose kwabesifazane abakhulelwe kungabonisa isifo sikashukela se-latent (latent), ngakho-ke kudinga ukulandelwa.
Amandla omzimba wokubamba izindaba ze-glucose. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwazi ukuthi inkomba kashukela ishintsha kanjani ngemuva kokudla, phakathi nosuku.
Isikhathi sosuku Ushukela wegazi ejwayelekile mmol / L
kusukela ngehora lesibili kuya kwehora lesine ephakeme kune-3.9
maqondana nokudla ngehora ngaphansi kuka-8.9
amahora amabili ngaphansi kuka-6.7
Ukuhlolwa kwemiphumela yocwaningo
Lapho esethole imiphumela yokuhlaziywa, udokotela kufanele ahlole izinga le-glucose ngokuthi: lejwayelekile, liphezulu noma liphansi.
Ushukela ophakeme ubizwa nge- "hyperglycemia."
Lesi simo sibangelwa izifo ezahlukahlukene zezingane nabadala:
Uyini umkhuba weCRP egazini?
Izifo zesistimu ye-endocrine (thyrotooticosis, izifo ze-adrenal gland, i-acromegaly, i-gigantism),
ukuvuvukala kwe-pancreatic acute futhi engamahlalakhona (pancreatitis),
isifo sezinso esihlangene nokuhlungwa kokulimala,
i-cystic fibrosis - ukulimala kwezicubu ezithintekayo,
izinqubo ze-autoallergic ezihambisana nama-antibodies ku-insulin.
I-Hyperglycemia kungenzeka ngemuva kokuhlupheka kwengcindezi, ukuzikhandla ngokomzimba, imizwelo enobudlova, ne-carbohydrate eningi ekudleni, ukubhema, ukwelashwa ngama-hormone e-steroid, ama-estrogens, nezidakamizwa ze-caffeine.
I-Hypoglycemia noma i-glucose ephansi kungenzeka nge:
Izifo ze-pancreatic (isimila, ukuvuvukala),
umdlavuza wesibindi, isisu, izindlala ze-adrenal,
Izinguquko ze-endocrine (kunciphile umsebenzi we-thyroid),
i-hepatitis kanye ne-cirrhosis yesibindi,
ubuthi be-arsenic notshwala,
izidakamizwa ezidakwayo (i-insulin, i-salicylates, i-amphetamine, i-anabolics),
ezinganeni ngaphambi kwesikhathi nezinsana ezivela kumama onesifo sikashukela,
ukushisa okuphezulu ngesikhathi sezifo ezithathelwanayo,
ukuzila isikhathi eside,
Izifo zamathumbu ezihambisana ne-malabsorption yezinto ezinenzuzo,
ukuzikhandla ngokweqile komzimba.
Ukuhlaziywa kwe-compact kwamalebhu amancane
Izindlela zokuxilonga zeglucose yesifo sikashukela
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo esingatholakala noma sisesimweni esifihliwe ukuhlolwa kwegazi kwe-glucose.
Izincomo ezenziwe lula zibonisa ukuthi izinga likashukela lisuka ku-5.6 liye ku-6.0 mmol / L libe yi- “prediabetes,” no-6.1 noma ngaphezulu njengesifo sikashukela.
Ukuxilongwa okungathandabuzeki kuyinhlanganisela yezimpawu zesifo sikashukela kanye nezinombolo zeglucose ephezulu:
kungakhathalelwa ukuthi kudliwe ukudla - 11 mol / l nangaphezulu,
ekuseni 7.0 nangaphezulu.
Uma kucutshungulwa ngokungabaza, ukungabi bikho kwezimpawu ezisobala, kodwa ukuba khona kwezici zobungozi, ukuhlolwa kwengcindezi kwenziwa nge-glucose noma kubizwa ngokuthi i-glucose tolerance test (TSH), nangendlela yakudala ebizwa ngokuthi "ushukela ijika".
ukuhlaziya ushukela wokuzila kuthathwa njengesisekelo,
zivuse u-75 g we-glucose emsulwa engilazini yamanzi futhi uyiphuze ngaphakathi (1.75 g ngegremu ngalinye lesisindo kunconyelwe izingane),
hlaziya kaninginingi isigamu sehora, ihora, amahora amabili.
Phakathi kocwaningo lokuqala nolokugcina, awukwazi ukudla, ukubhema, ukuphuza amanzi, noma ukuzivocavoca.
Ukuguqulwa kwesivivinyo: inkomba ye-glucose ngaphambi kokuthatha isiraphu kufanele ibe yinto evamile noma engejwayelekile. Uma ukubekezelela kukhubazeka, ukuhlaziya okuphakathi kubonisa (11.1 mmol / L ku-plasma no-10,0 egazini le-venous). Ngemuva kwamahora amabili, izinga lihlala lijwayelekile. Lokhu kusho ukuthi i-glucose edakiwe ayimunwa, ihlala egazini nakuma-plasma.
Ngokukhuphuka kweglucose, izinso ziqala ukuyidlulisela kumchamo. Lolu phawu lubizwa ngokuthi yi-glucosuria futhi lusebenza njengenqubo eyengeziwe yesifo sikashukela.
Ukuhlola ushukela wegazi kuyivivinyo ebaluleke kakhulu ekuxilongekeni okufika ngesikhathi. Izinkomba eziqondile ziyadingeka yi-endocrinologist ukubala ukuthi mangaki amayunithi we-insulin anganxephezela umsebenzi we-pancreatic onganele. Ukulula nokufinyeleleka kwezindlela kuvumela ukuqhutshwa kokuhlolwa kwenqwaba kwamaqembu amakhulu.
Ushukela omncane wegazi (hypoglycemia)
I-Hypoglycemia - lokhu kwehla ushukela wegazi ngaphansi komkhawulo ophansi ojwayelekile, okungukuthi, ngaphansi kuka-3.3 mmol / L.
Yini ebangela ukwehla kushukela wegazi?
I-Hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi) ingavinjelwa. Uma isiqephu esinjalo senzekile, uhlala enesizathu. Kubalulekile ukwazi ukuthi yini engadala i-hypoglycemia, ukuze ivikeleke njalo.
I-Hypoglycemia namaphilisi akho
I-Hypoglycemia kuyaqabukela kwenzeka kubantu abaphuza izidakamizwa ze-hypoglycemic. Kodwa-ke, kungenzeka uma uthatha amaphilisi ngaphezu kwesilinganiso esibekiwe.
• Uma ulahlekelwe omunye wemithi yakho, ungalokothi uthathe inani eliphindwe kabili ngokuzayo ukwenza inani eliphelele lamaphilisi. Vele uphuze umthamo ojwayelekile.
• Uma ungaqiniseki ukuthi uselithathile yini iphilisi, kungcono ukweqa umthamo kunokuthatha ubungozi bese uliphinda kabili.
• Ukweqa noma ukuhambisa ukudla noma ukungondleki yizimbangela ezivame kakhulu ze-hypoglycemia. Kungakho ukudla “okulambile” kungalungele abanesifo sikashukela.
• Ukuzivocavoca okukhulu kakhulu noma isikhathi eside nakho kungadala i-hypoglycemia, ikakhulukazi uma ungazange udle kahle ngokwanele ukumboza lezi zindleko zamandla.
Utshwala bungathinta ukulawula kwakho ushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, uma uphuze ngokweqile, awunakuqaphela izimpawu eziphazamisayo ze-hypoglycemia. Kuyelulekwa ukuqeda ngokuphelele uphuzo oludakayo.
Kungenzeka kuphela ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile ngenani elincane (ikani likabhiya, ingilazi ye wayini, ingilazi ye-vodka noma i-cognac). Kuyadingeka ukuthi ube nesibiliboco ngemuva kokuphuza utshwala futhi ungasebenzisi kabi inani lotshwala obudakayo.
Ungayibona kanjani i-hypoglycemia?
Abantu abaningi banezimpawu zokuqala ze-hypoglycemia, njenge:
- Ukuthukuthela, ikakhulukazi endaweni ekhanda.
- Ubunzima bokugxila.
Uma i-hypoglycemia imnene, ngeke uzwe okunye ngaphandle kwezimpawu ezingenhla. Kodwa-ke, uma ushukela wegazi wehla futhi uphansi, kungaholela ekunciphiseni umlenze, ukuwa, noma ngisho nokulahlekelwa ukwazi (i-coma). Ngenhlanhla, lokhu akuvamile ukwenzeka.
Izimpawu ze-hypoglycemia enzima:
- Kabili emehlweni.
- Shintsha esimweni sokuziphatha nokuziphatha, impi.
- Imilenze iminyene, ukuwa, ukungazi (coma).
Abangani bakho noma izihlobo zingabona i-hypoglycemia phambi kwakho ngenxa yezimpawu ezilandelayo:
-Ukuganga, ukucasuka, ukudabuka.
- Pallor, ukujuluka ngokweqile.
I-Hypoglycemia idala ukungazi okudidayo, futhi kungenzeka ungabakholelwa abangane bakho. Uma abantu abasondele kuwe becabanga ukuthi unezimpawu ze-hypoglycemia, kufanele udle okuthile okumnandi, noma ngabe uzizwa ulungile.
I-Hypoglycemia ingenzeka ngokushesha okukhulu, emizuzwini embalwa, bese kudlula imizuzu eyi-10-15 ngemuva kokuthatha amaswidi. Ngemuva kokuthi ushukela wegazi ubuyele kokujwayelekile, izimpawu ze-hypoglycemia zizonyamalala futhi uzozizwa futhi.
Yini okufanele uyenze uma kuvela izimpawu ze-hypoglycemia?
Uma uzwa izimpawu ezithile ze-hypoglycemia, akunzima ukuzisusa ngokuthatha into equkethe ama-carbohydrate angagayeka kalula, ngokwesibonelo:
- 4-5 izingcezu kashukela
- 1 ingilazi yesiphuzo esiphundu (i-lemonade, i-Pepsi-Cola, i-Coca-Cola)
- 1 ingilazi yejusi yezithelo (ungasebenzisa imvelo, ngaphandle koshukela ongeziwe)
Ngemuva kwalokhu, kumele udle ama-carbohydrate ahamba kancane kancane (njengesinkwa) noma uphuze ingilazi yobisi ukuze kulondolozwe izinga le-glucose elibuyiselwe.
Isiguli sikashukela esithola imishanguzo enciphisa ushukela kufanele siphathe njalo ama-carbohydrate ashelelekile!
Ngokuqondene nalokhu, ushukela izingcezu, iphakethe elincane lejusi yezithelo noma esinye isiphuzo esimnandi kakhulu esivumelana kakhulu nokukhulula i-hypoglycemia.
Yini umuntu oseceleni kwakho (abazali, abangane) okufanele ayenze uma ekuthola ungazi?
Isenzo 1: Ukukunikeza esitebeleni "ohlangothini lwakho" isikhundla.
Akufanele neze uzame, lapho umuntu engazi, athulule okuthile emlonyeni wakhe - angaminyanisa! "Ushukela ngaphansi kolimi" akusizi!
Isenzo 2: ukwethula glucagon! Iphakethe liqukethe: isirinji eyodwa ene-solvent nenaliti enepipi elinamathiselwe kuyo, kanye nebhodlela eline-glucagon powder.
Faka amanzi kwisirinji ku-glucagon vial.
• Hlanganisa okuqukethwe kuze kuqedwe ngokuphelele.
• Donsa isixazululo seglucagon kwisirinji.
• Yethula isixazululo se-glucagon ngokunqenqema noma ethangeni elingaphezulu elingaphezulu.
Ukuthola kabusha kuvame ukwenzeka kungakapheli imizuzu eyi-10 ngemuva kokuphathwa umuthi.
Ngemuva “kokuvuka” kusuka kumjovo weglucagon, udinga ukuphuza ingilazi eyi-1 yejusi yezithelo (200 ml) futhi ngaphezu kwalokho udle ama-carbohydrate ashubile (ngokwesibonelo, isinkwa) ukuze izinga likashukela wegazi lingaphinde linciphe!
Uma isifo sikashukela "singalulami" kungakapheli imizuzu eyi-10 ngemuva kokujova i-glucagon, abantu abaseduze kufanele babize udokotela!
Ungakuvikela kanjani i-hypoglycemia?
• Ungalokothi weqe ukudla.
Yidla ama-carbohydrate (isinkwa, okusanhlamvu, imifino, izithelo) ngaso sonke isidlo.
• Uma wenza imithambo yokuzivocavoca umzimba, thatha ukudla okulula okudla okuqukethe amagremu ama-15 kuya kwangama-30 ama-carbohydrate ngokushesha ngaphambi kokuqala kweseshini bese uphinda lokhu njalo ngehora uma wenza umsebenzi omkhulu womzimba.
Uma uzizwa izimpawu ze-hypoglycemia uma ushayela, yeka uthathe okuthile okumnandi. Musa ukuqhubeka nokuhamba uze uqiniseke ukuthi uzizwa ujwayelekile. Ungazami ukuqhubekela phambili ungazinaki lezi zimpawu, ngethemba lokuthi zizonyamalala - ngeke zanyamalala zodwa.
Akunakwenzeka ukuthi uyoke ube ne-hypoglycemia uma ulandela zonke izincomo zikadokotela. Kepha kumqoka kakhulu ukuba nokuhlinzekwa kwemikhiqizo equkethe ushukela, efana noshukela, amaswidi, amakhukhi, ekhaya, emsebenzini noma emotweni.
Uma ucabanga ukuthi uke waba nezimpawu ze-hypoglycemia, phawula ukuthi kwenzeka nini nokuthi yiziphi izizathu ezingaba yikho, bese uxoxa nodokotela wakho ngalezi ziqephu.
Ukuthuthukiswa kwe-intrauterine kwesibeletho
Izinguquko zomzimba, isimo sezengqondo sowesifazane
Izinkinga Zengqondo Zasemva Kwezengqondo
Ama-Harbinger wokuzalwa kwengane, izinhlungu, i-analgesia, isimilo sowesifazane, ukuphefumula
Ukudla okunempilo kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa
Izici, izinzuzo zokuncelisa ibele
Yikuphi ukubalwa kwe-glucose okubhekwa njengokujwayelekile?
Izinto eziningi zithinta impilo yabesifazane, kufaka phakathi noshukela. Inkomba yobudala inokwayo, ngakho-ke lapho ukuhlaziya kukhombisa okweqile kokujwayelekile noma ukusilela, khona-ke izinyathelo kufanele zithathwe ukubuyisa isimo.
Uma umuntu wesifazane engazi ukuthi kungakanani ushukela okukhona emzimbeni wakhe endaweni ethile, ngeke akwazi ukubona izimpawu eziyingozi. Imvamisa, impilo engeyinhle ichazwa yimithwalo esindayo, noma, empeleni, isifo sikashukela singakhula kahle.
Njengoba sekushiwo, esigabeni ngasinye sobudala kukhona inkomba kashukela. Kuliqiniso, kwabesifazane abakhulelwe lezi zinkomba zihlukile kancane.
Ithebula elingezansi libonisa ukuthi yiliphi izinga likashukela elijwayelekile.
Isigaba sobudala Umkhawulo ophansi (mol / l) Umkhawulo ophezulu (mol / l)
Ukuthomba (kuze kube yiminyaka eyi-14) 3,4 5,5
Ngaphambi kokuya esikhathini (kuze kube iminyaka engama-60) 4,1 6
Ukuguga (kufika ku-90) 4,7 6,4
Abesifazane abangaphezu kweminyaka engama-90 4,3 6,7
Ngisho nangaphambi kokuba kuqhutshekwe nokuhlaziywa, ungabona izimpawu ezibonisa ukwanda ushukela.
Owesifazane uphethwe yi:
ukomela okukhulu, okuhlupha ngisho nangemva kokuba inani elikhulu lamanzi seliphuzile,
ukulunywa kwesitho sangasese sowesifazane sangasese kanye nokungaphatheki kahle esinyeni,
Izimpawu ezethulwe ngokuvamile aziveli ndawonye. Isigaba sokuqala sibonisa ngokuba khona kwezimpawu ezimbili kuya kwezintathu. Kepha uma kunesidingo esikhona soketshezi, manje yisikhathi sokuya kudokotela ukuyobona ukuthi ngabe kukhona yini isifo sikashukela noma cha.
Akukho okuhle lapho ushukela wehla. Kulokhu, i-hypoglycemia iyenzeka. Kulokhu, isifo sikashukela singatholakala futhi.
Yiziphi izimpawu ezibonisa ukuthi izinga likashukela lehlile?
Isimo sesiguli sihambisana:
ukwehluleka (kwezinye izimo).
Njengamazinga e-glucose aphezulu, aphansi kakhulu adalwa yizici ezithile. Into esemqoka ukungazinaki izimpawu zokuqala.
Ithebula libonisa ukuthi imuphi ushukela we-glucose ovunyelwe ngosuku ngaphambi nangemva kokudla:
I-Hypoglycemia ngaphansi kuka-3.3 mol / l
Isilinganiso esijwayelekile 3.3-3.5 ngaphambi kokudla kufika ku-7.8 ngemuva kokudla
I-Hyperglycemia ukuzila okungaphezulu kuka-5.5 ezingaphezu kuka-7.8 ngemuva kokudla
Ungaziphumelela kanjani izivivinyo?
Izibalo zithi abesifazane bahlupheka kakhulu ngenxa yezinguquko emazingeni kashukela kunabesilisa. Ngakho-ke, inani leshukela kufanele lihlale lilawulwa. Kubalulekile ukwazi ukuthi kuyini ukuthola ushukela nsuku zonke, ukuze izinga lihlale lilijwayelekile.
Ukuze izimpawu zingazenzi zizizwe, kuyadingeka ukuthi kuqashelwe impilo lapho kuba nokuzamazama okunamandla kwama-hormone, lapho umntwana esanda kwenzeka, ngesikhathi sokukhulelwa kwengane, ngokunqamuka kokuya esikhathini futhi, futhi, lapho kuba nengcindezi enkulu.
Ukuhlaziywa kuzothembeka uma unikela ngegazi esiswini esingenalutho ekuseni.
Owesifazane ozohlolwa isifo sikashukela kufanele akhumbule imibandela ethile:
Amahora ayisishiyagalombili ngaphambi kwenqubo, awukwazi ukudla noma yini.
Kunconywa ukudla okulinganiselayo izinsuku eziningana ngaphambi kokuhlolwa.
Noma ikuphi utshwala kuyaphikiswa ngosuku.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa akuvunyelwe.
Ngaphambi kokuhlolwa, kufanele wenqabe ukuxubha amazinyo akho, kanye nokusebenzisa itshungama.
Uma isivivinyo sokuzila sikhombisa okuqukethwe kweglucose ephezulu, kuzobekwa okunye ukuhlolwa ukuze kutholakale ukuthi kunesifo esifanelekile. Kuyadingeka futhi ukulungiselela inqubo yesibili.
Lokhu kusho okulandelayo:
Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuhlolwa, kuthathwe ama-carbohydrate asamba angama-200 g (ngosuku olulodwa). Ntambama badinga i-150 g, kanti kusihlwa - 30-40 g.
Ngaphambi kwenqubo, amahora 8-12, akukho mkhiqizo ongadliwa.
Ukuhlaziywa kuthathwa esiswini esingenalutho, njengasesimweni esedlule.
Ngemuva kwalokho isiguli sinconyelwe isisombululo se-glucose noma ushokoledi.
Ngosuku olufanayo, ngemuva kwamahora ama-2, kuhlaziywa okokugcina.
Kukho konke lokhu okungenhla, kulandela ukuthi izinto ezahlukahlukene zingathinta amazinga kashukela. Inkomba izohluka ngokuya ngeminyaka, ngesikhathi lapho igazi lithathwa khona, lapho livela khona, igazi le-venous noma umunwe, nokuthi isifundo sidle ngaphambi kwenqubo.
Ubudlelwano be-hemoglobin ne-glucose ye-glycated
I-glycated hemoglobin iyingxenye ebalulekile ye-hemoglobin. Izinga likashukela likhuphuka kakhudlwana, i-hemoglobin ethe xaxa. Uma isifo sikashukela sikhona, odokotela bazonikeza isivivinyo sokuba khona kwe-glycated hemoglobin, noma kunalokho, ngobuningi baso. Ukuhlaziywa okunjalo kunokwethenjelwa kakhulu kunokuhlolwa kokuhlola amazinga kashukela.
Inkomba ye-glycated hemoglobin ayinakuhluka kobudala. Ngakho-ke, ngokubheka izinguquko zayo, udokotela angasho ukuthi ukwelashwa kuzohlala isikhathi eside kangakanani nokuthi kusebenza kangakanani okwamanje.
Inzuzo yokufunda i-hemoglobin ye-glycated ukuthi ukuqinisekiswa kwezinkomba kungenzeka ngemuva kokuthi isiguli sidle okuthile noma cha. Ngisho nokuzivocavoca umzimba ngeke kuphazamise.
Ngaphezu kwalokho, izinga le-hemoglobin ye-glycated ngeke lithinteke:
noma yiziphi izifo zesimo sesikhashana
Ngenxa yokuhlaziywa kwenani le-hemoglobin ye-glycated, kuvela ukuthi kuthola ushukela kusenesikhathi kakhulu. Kuliqiniso, indlela enjalo ibiza kakhulu kunokuhlola i-glucose. Futhi akuwona wonke ama-laboratories anamadivayisi akhethekile.
Kungani i-cholesterol idingeka?
Ubudlelwano phakathi kwamafutha nama-carbohydrate metabolism busobala. Uma kunama-carbohydrate amaningi, amaseli wamafutha aqongelela, ngenxa yokuthi kukhona ukwephulwa kwe-lipid metabolism. Lokhu kuholela kuphi?
Ezikebheni, kukhuphuka inani lesilinganiso se-cholesterol, ngokungangabazeki kuthinta isimo semikhumbi.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zihlushwa izinguquko ku-cholesterol. Lapho ukugula kuqubuka futhi kukhuphuka i-cholesterol ibonwa, bakhuluma ngezizathu ezifanayo ezethukuthelisa lesi simo.
ukuntuleka kokunyakaza okusebenzayo.
Kungakanani i-cholesterol okufanele ibe khona egazini ukuze ibhekwe njengejwayelekile? Bobabili abesilisa nabesifazane banezinga le-cholesterol lika-4 mol / L. Njengoba umuntu ekhula, izinkomba ziyanda. Kepha emzimbeni wesifazane, i-cholesterol ngemuva kweminyaka engama-50 yakheka ngaphezulu ngenxa yokwehla komkhiqizo wama-hormone ocansi aqeda i-cholesterol.
Ungavumeli izinkomba zehlise. Ngaphandle kwalokho, kufanele ubhekane nokushaywa yi-hemorrhagic of the brain, inzalo, ukukhuluphala kanye nohlobo 2 sikashukela.
Ngenxa yokudla okwenziwe ngudokotela wakho, izinga lakho likashukela lizohlala lilijwayelekile. Kungcono ukuthi uzihlole nsuku zonke nge-glucometer. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuqopha ubufakazi ukuze uqaphele isifo esingenzeka ngokuhamba kwesikhathi.
Cabanga ngetafula lamazinga kashukela egazini kwabesifazane ngeminyaka. Izincomo ezijwayelekile zokuhlolwa kokuphumelela. Ithebula
Izimpawu nezimbangela zezinguquko kushukela wegazi. Inani lezinkomba ezijwayelekile kwabesifazane beminyaka ehlukile.
Yini okufanele yenziwe ukuguqula amazinga kashukela emzimbeni? Ungakwenza kanjani lungiselela ukuhlolwa koshukela?
Odinga ukukwazi ukuze ungaphuthelwa yizimpawu ezesabekayo nangesikhathi hlonza isifo se-nascent esihambisana nokuncipha noma ukwanda kwezinga le-glucose emzimbeni wesifazane? Mayelana nalokhu kamuva esihlokweni.
Ngokwezibalo, umzimba wesifazane usengozini yokuhlaselwa i-glucose engalapheki kunokuba isibumbu sendoda.
Ngokusekelwa kwalokhu, abesifazane badinga ukubheka ushukela wegazi ngezikhathi ezithile futhi bazi izinombolo eziphambili ezihambisana nokujwayelekile.
Ukugxila okubalulekile kufanele kukhokhwe kulokhu ngesikhathi sokuqhaqhazela okunamandla kwama-hormone omzimba, njengokufikisa, ukukhulelwa nokuya esikhathini, kanye izinkathi zokucindezela okukhulu.
Kuyadingeka ukuthi kuhlaziywe ekuseni ngesisu esingenalutho, ukuze izinkomba zithembeke kakhulu.
Kunezindlela ezimbili zokuhambisa lolu hlaziyo: isivivinyo esisheshayo nendlela yelebhu.
Kunemibandela eminingana okumele ibonwe ngaphambi kokudlula kokuhlaziywa:
ungadli noma yikuphi ukudla okungenani amahora angu-8,
ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuhlaziywa, yidla ngokulinganisela, ungadli ngokweqile,
Ungabuphuzi utshwala amahora angama-24 ngaphambi kokuhlolwa
Ngaphambi kokuhlolwa, awukwazi ukuxubha amazinyo akho noma ukuhlafuna izinsini.
Uma kuvela ukuthi izinga likashukela egazini lowesifazane lidlula okujwayelekile, bese benza olunye uvivinyo - lokubekezelela i-glucose, ekuxilongeni kokugcina, ngakho-ke ungamangali uma kwenzeka okuthile.
Kuyadingeka futhi ukuyilungiselela kusengaphambili:
ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuhlaziywa, udinga ukusebenzisa cishe ama-200 g ama-carbohydrate ngosuku, wephula lesi sibalo saba izingxenye ezimbili - i-150 g phakathi nosuku no-30-40 g kusihlwa,
ngaphambi kokuhlaziya, awukwazi ukudla noma yini amahora angu-8 kuya kwayi-12,
ahlole igazi ekuseni ngesisu esingenalutho,
khona-ke isiguli kufanele siphuze isixazululo sikashukela noma sidle ushokoledi,
emahoreni amabili kamuva, baphinda bahlola olunye igazi.
Ngale ndlela imiphumela yokuhlaziya Izinga kashukela egazini lingahle lincike ezicini eziningana: iminyaka yesiguli, igazi lalithathwa emthanjeni noma emunweni, isikhathi lapho isivivinyo sithathwe, ngabe kukhona ukudla amahora angama-8 ngaphambi kokuhlolwa.
Kwenqatshelwe ngokuphelele ukubhema izinsuku eziningana zokuhlolwa, ukukhumbule njalo lokhu.
Khuphula ushukela emzimbeni wesifazane
Imvamisa, ngisho nangaphambi kokuhlaziywa, owesifazane ubona ezinye izimpawu ezethusayo:
ukomela okuqinile okungapheli, noma ngabe uphuza ilitha lamanzi ngesikhathi esisodwa,
ukuvela kokulunywa kwesikhumba,
kaningi esiya endlini yangasese,
ukulunywa kwesitho sangasese sowesifazane kanye nokulimazeka kwe-bladder,
Izimpawu zingahle zingabonakali ku-totere, kuzigaba zokuqala izinto ezimbili noma ezintathu kuhlu zivame ukutholakala, noma kunjalo, kwesinye sezimpawu - ukoma okungapheli - sekuyisikhathi sokubona udokotela.
Izizathu zokwanda kwezinga lezinto
Lapho kukhona izifo ezithile ze-endocrine, ukwanda koshukela wegazi kuwuphawu olufana. I-Hyperglycemia iyisibonakaliso sesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, ukwanda ushukela wegazi kungenzeka kulezi zimo ezilandelayo: ukukhulupha ngokweqile kanye nokuntuleka komzimba, indlela yokuziphatha engafanele, Izinkinga ze-metabolic.
Imikhuba emibi, efana notshwala nokubhema, ukucindezela, isigaba sesibili somjikelezo wokuya esikhathini, nayo iyathinta.
To ushukela ophansi, kufanele ugweme ukudla okunoshukela omningi bese ulandela ukudla okuthile lapho ungadli khona ushukela, amaswidi, amaswidi ahlukahlukene kanye nama-buns, kanye nokuyeka imikhuba emibi.
Kepha lokhu akusho ukuthi udinga ukuziphika ubumnandi futhi ungadli amaswidi.
Emashalofini aveziwe ezahlukene imikhiqizolapho i-glucose ingafakwa khona futhi ithathelwa indawo yi-analogues yayo, engathinti amazinga kashukela ngokuphelele. Ukudla okunjalo kubizwa ngokuthi yi-dietetic noma i-diabetes.
Ushukela wegazi ophansi
Ukwehlisa amazinga kashukela nakho akulona iqiniso emzimbeni wesifazane. Lesi simo sibizwa nge- hypoglycemia, futhi singakhula kunoma yimuphi umuntu, siphilile futhi isifo sikashukela.
Njengoba kunoshukela ophansi emzimbeni, owesifazane uzizwa ubuqili kanye nokungaphatheki kahle, ukukhuphuka kokujuluka, ukwanda kwamakhanda, futhi ungaphela amandla.
Izizathu zokunciphisa ushukela zilele emisebenzini efanayo yomzimba eyehlisiwe futhi ngokweqile, kodwa-ke, zona kanye nokuzilolonga kanzima, ezihambisana nokuvinjelwa okuqinile kokudla imbangela yokuhlaselwa kwe-hypoglycemia noma into enjalo.
Ukugwema lokhu, akufanele wenze izikhala ezinkulu phakathi kokudla ngakunye, kungakuhle ukuthi udle amahlandla ayisihlanu noma ayisithupha ngosuku, cishe izingxenye ezingama-250 g.
Ukusetshenziswa ngokweqile kwekofi ne-caffeine, kanye nokubhema, kunomthelela omubi emzimbeni wonke nasezingeni lamazinga kashukela emzimbeni ikakhulukazi, khumbula lokhu.
Awukwazi ukuphuza iziphuzo ezi-carbonated notshwala esiswini esingenalutho, kungaba namandla amaningi vusa ukuhlasela okunamandla.